बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानूनका लागि जनदबाब सिर्जना गरौ ! - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानूनका लागि जनदबाब सिर्जना गरौ !
लेखक : लेखापढी २८ माघ २०७७, बुधबार १९:२६ मा प्रकाशित
संबिधान बन्दै गर्दा नारी अधिकारलाई समाबेश गरि ७ बुदे ज्ञापन-पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको थिए ।
सायद मैले लगायत धेरैले पठाएका ति सुझाबहरु सम्भबत: पढ्दै नपढी रद्दीको टोकरीमा फ्याकिए होलान । आज जुन मानिसहरु निर्मला पन्त र भागरथी भट्टको न्यायको लागी बोल्दै छन् सम्भबत तिनै मानिसहरु हिजो संबिधान बन्दै गर्दा संसारको उत्कृस्ट संबिधान भन्दै दिप प्रज्ज्वलन गर्दै थिए र आजसम्म तिनीहरुलाई बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको कारण मध्यको मुख्य कारण हाम्रो कमजोर कानुन हो भन्ने थाहासम्म छैन।
निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्म आइपुग्दा, मात्र करिब साढे २ बर्षमा तीन हजार तिन सय भन्दा बढी छोरी चेलीहरु बलात्कृत भएछन ।
निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्म आइपुग्दा, मात्र करिब साढे २ बर्षमा तीन हजार तिन सय भन्दा बढी छोरी चेलीहरु बलात्कृत भएछन । अन्य कतिपय त तथ्यांक मै नसमेटिएका यस्ता धेरै घटनाहरु डर, धम्की, धन, पद र पहुँचको रबाफमा दबाइएका छन् होला । यति बिकराल रुपमा फैलिदै गएको जघन्य अपराधमा किन कसैको स्थायी समाधान तर्फ चासो नगएको ?
सर्पले काचुली फेरेझैँ दुई-चार घटनामा बेला बखत माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउहरुमा समाजसेवीहरु, अधिकारबादीहरुको पुकार र युटुबेहरुलाई काम बाहेक केही भएको छैन। प्राय: अपराधमा अपराधीले उन्मुक्ति पाएका छन् तर पिडितहरु न्यायको भिख माग्दै थाकेका देखिन्छन ।
यसरि पटक-पटक अनिर्णयक दबाब दिन भन्दा एक पटक निर्णायक आन्दोलन गर्दै जनदबाब दिएर कानुनलाई परिमार्जन गरि १८ बर्ष मुनिका बालबालिका बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुने किसिमको सजायको व्यवस्थाका लागि व्यापक जनदबाब दिन जरुरि छ ।
यसरि पटक-पटक अनिर्णयक दबाब दिन भन्दा एक पटक निर्णायक आन्दोलन गर्दै जनदबाब दिएर कानुनलाई परिमार्जन गरि १८ बर्ष मुनिका बालबालिका बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुने किसिमको सजायको व्यवस्थाका लागि व्यापक जनदबाब दिन जरुरि छ । बलात्कारिहरुलाई आजीवन काराबास सहित नपुंसक बनाउने सम्कामको कानुनको ब्यबस्था गरिनु जरूरी छ ।
सरकार मौन रहने र यस्ता सामाजिक अपराधमा कहिलेसम्म जनताले न्यायका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने ? प्रत्यक्ष देखिएको अपराधमा किन सरकारले कडाइका साथ् कारबाही अगाडी बढाउँन सक्दैन ?
आउनुहोस, संसारको आधा भन्दा बढी भाग ओगट्ने देबी रुपी नारि बिरुद्द हुने हिँसाको स्थायी समाधान एउटा कठोर कानुन बनाउन दबाब दिऊ । न्यायका लागि दबाब सहित कडा कानुन अबिलम्ब बनाउन सरकारलाई चौतर्फी जनदवाव सिर्जना गरौ ।
आउनुहोस, संसारको आधा भन्दा बढी भाग ओगट्ने देबी रुपी नारि बिरुद्द हुने हिँसाको स्थायी समाधान एउटा कठोर कानुन बनाउन दबाब दिऊ ।
यौन हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरुको सफल जीवनको कामना गर्दै बलात्कारमा परि ज्यान गुमाउने बहिनी भागरथी भट्टको आत्माले न्याय पाओस ! हार्दिक समबेदना !!